Iindaba -Iimpawu zecandelo lokucoca insimbi engenasici
Izinto zokucoca insimbi ezingenasici zahlulahlulwe zaba zizinto zokucoca ulwelo, kunye nezinto zecwecwe lokucoca ulwelo.
Iimpawu zento yokuhluza yesinyithi yile: inokusetyenziswa phantsi kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu; ilungele ukubuyela umva koxinzelelo lwasekhaya kunye nohlaziyo ngokutsha.
Ngokweendlela ezahlukileyo zokwenza, yahlulwe yento yokuhluza inxeba yesinyithi, umnatha wesinyithi (waziva) isihluzi esenziwe ngesinyithi, ipleyiti yesinyithi isici sokucoca ulwelo, isiqwenga sesinyibilikisi somgubo wentsimbi, isuntswana lokucoca ulwelo lwesinyithi. Iimpawu ezahlukeneyo zaziswa apha ngezantsi.
(1) Umnatha wensimbi wokucoca ulwelo: nge-10 ~ 000pum yenqanaba lokucoca; ngokweemfuno zokwenyani zokusetyenziswa, izakhiwo ezahlukeneyo zothango lwenkxaso zinokukhethwa ngaphakathi nangaphandle kwesihluzi. Ihlala isetyenziswa apho uxinzelelo lokuhluza luphantsi kwaye ukubuyela umva rhoqo kuyadingeka.
(2) enemingxuma Metal (waziva) elicociweyo element element lokucoca ulwelo: nge 5 ~ 300um izinga lokucoca ulwelo; indawo yecebo lokucoca ulusu emva kokusonga inyuswe kakhulu, kwaye amandla endawo yokuhluza nayo iphuculwe kakhulu. , Isetyenziswa rhoqo kwiimeko apho uxinzelelo lokuhluza luphezulu kwaye umthamo omkhulu wokubamba ubumdaka uyafuneka; ngakumbi isicelo esivumela ukuba isihluzo sisuswe kwaye sicocwe; kwifayibha yemichiza, ikwabonelela ngento yokunyibilikisa enokusebenza kuxinzelelo olungaphezulu kwe-10MPa.
(3) Metal ipleyiti enemingxuma sintered isihluzo element: ukuhluza ukuchaneka 5 ~ 200pum; icwecwe lokucoca ulwelo olwenziwe ngokuntywila kwiscreen sokucoca ulwahlulo oluninzi (kubandakanywa iscreen sangaphakathi nesangaphandle) phantsi komgangatho wobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu lunokumelana noxinzelelo oluphezulu kunye nokugcina ukucoca komphezulu Iimpawu, ke kulula ukuzicoca. Ihlala isetyenziswa apho umahluko woxinzelelo lwecebo lokucoca ulwelo liphezulu kwaye ukubuyela kwakhona kwi-Intanethi rhoqo kuyafuneka.
(4) Umgubo wensimbi ococekileyo wokucoca ulwelo: ukuchaneka kokucoca ulwelo 0.5 ~ 100pum; Uluhlu lokucoca ulwelo olwenziwe ngumgubo wentsimbi omdaka phantsi kobushushu obuphezulu kunye neemeko eziphezulu zinokumelana nolwahluko omkhulu. Ngenxa yokuba umaleko wokucoca ulwenziwo uneempawu zokuhluza nzulu kwicala lobungqingqwa, ke ngoko, akukho lula ukucoceka, kodwa unokuchaneka okuphezulu kokuhluza kunye namandla amakhulu okubamba ukungcola ixesha elinye. Ihlala isetyenziswa apho kufunwa ukuchaneka okuphezulu kokuhluza, kwaye ukungcola ngamasuntswana athambileyo okanye izinto zecolloidal, endaweni yezinto zokucoca isinyithi ezingenakusetyenziswa, nalapho i-3 ukuya kwi-5 ye-recoils evunyelweyo.
(5) Metal wedge wire inxeba lokucoca ulwelo: Ukuchaneka ukuhluza yi 25 ~ 5000pum, nto leyo ngokuqhubekayo inxeba yi ucingo nesinqumka, ngamandla aphezulu kunye nomthamo flow enkulu. Inokuphinda isetyenziswe kwakhona kwaye isebenza kakuhle. Ifanelekile ngakumbi kuthotho lwe-LAC kunye ne-SAS yeenkqubo zokucoca ubuyiselo oluzenzekelayo olusungulwe nguFeichao.
Oku kungasentla ziimpawu zento yokuhluza engenasici.